Mini Printer ကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ
2 လက်မ / 58mm စီးရီး
3 လက်မ / 80 မီလီမီတာစီးရီး
WP300D4လက်မတံဆိပ်ပရင်တာ
WPB200 4- လက်မတံဆိပ်ပရင်တာ
WP-Q3C 58mm မိုဘိုင်းပရင်တာ
WP-Q3A 80mm မိုဘိုင်းပရင်တာ
21-07-02 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
ပရင်တာ၏သမိုင်းသည်လည်းအဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတို့၏သမိုင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ မှစ၍ လေဆာ၊ inkjet၊ အပူပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အခြားသက်ရောက်မှုမရှိသောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းပညာများပေါ်ထွက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်လာသည်။ ပရင့်ခေါင်း၏အပူမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနည်းလမ်းကိုဖက်စ်စက်တွင်ပထမဆုံးအသုံးပြုခဲ့သည်။
WP-Q2A ၏ Pringting Mode ကိုပြောင်းပါ
21-06-24 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း WINPAL ကြယ်ပွင့်အပူပရင်တာ - မိုဘိုင်းပရင်တာ WP-Q2A ကိုငါဆောင်ခဲ့ ဦး မည်။ WP-Q2A သည် ၂ လက်မအရွယ် dual-mode အပူပရင်တာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၀၀ မီလီမီတာ / အမြင့်အမြန်နှုန်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ မြန်နှုန်းမြင့်ပုံနှိပ်အမြန်နှုန်း၊ အလွယ်တကူယူရန်အလွန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအရွယ်အစား ဒါဟာသင့်အတွက်စံပြရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါက ...
Thermal Printer Maintenance ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအချက်များ
21-06-18 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
Thermal Printer သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်အသက်တာတွင်ရုံး၌သော်လည်းကောင်း၊ အိမ်တွင်သော်လည်းကောင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပူပရင်တာသည်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ နှောင်းပိုင်းတွင် ၀ တ်ဆင်မှုနှင့်သုံးစွဲမှုသည်အလွန်ကြီးမားသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နေ့စဉ်ဘဝတွင်သတိထားသင့်သည်။ ကောင်းမွန်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည်ကြာရှည်လိမ့်မည်၊
21-06-11 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
တရုတ်ရိုးရာအစဉ်အလာရှိသောနဂါးလှေပွဲတော်မကြာမီကျင်းပတော့မည်ဖြစ်သည်။ နဂါးလှေပွဲတော်သည်နေလပြက္ခဒိန်တွင် ၆.၁၄ ရက်ဖြစ်ပြီးပဉ္စမလ၏ပဉ္စမနေ့ရက်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားအားလပ်ရက်အစီအစဉ်များအရ WINPAL သည်ဇွန်လ ၁၄ ရက်၊ ဇွန် ၁၄ ရက်တွင်အားလပ်ရက်တစ်ခုကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
အပူလွှဲပြောင်းပရင်တာ၏ဖဲကြိုးများ Install လုပ်နည်း WP300A
21-06-04 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
WP300A ကိုတိုက်ရိုက်အပူနှင့်အပူလွှဲပြောင်းမှုနှစ်ခုလုံးတွင်ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်တစ်လျှောက်လုံးတွင်မြန်ဆန်သောတံဆိပ်ကပ်ခြင်းအတွက်အားကောင်းသည့် 32-bit ပရိုဆက်ဆာနှင့် 4MB Flash Memory, 8MB SDRAM, Flash Memory တိုးချဲ့မှုအတွက် SD Card Reader၊ သိုလှောင်မှုတိုးမြှင့်မှုအတွက်4GB အထိရှိသည်။ ။
(၆) WINPAL ပရင်တာကို Windows စနစ်တွင် Bluetooth နှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်နည်း
21-05-28 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
ပြန်လာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီနေ့ခေတ်မှာ WINPAL ပရင်တာကို Windows စနစ်များမှာ Bluetooth နဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာပြမယ်။ အဆင့် ၁ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း - power ကွန်ပျူတာစွမ်းအားကိုအသုံးပြုခြင်း②ပရင်တာကိုဖွင့်ပါ။ ၂။ Bluetooth ကိုဆက်သွယ်ခြင်း: ၀ င်းဒိုးချိန်ညှိချက်များ→ Bluetooth နှင့်အခြားကိရိယာများ device စက်တစ်ခုထည့်ပါ→ပရင်တာကိုရွေးချယ်ပါ။
(Ⅴ) Android စနစ်တွင် WINPAL ပရင်တာကို Bluetooth နှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်နည်း
21-05-19 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
ဟယ်လိုအချစ်ရယ်! နောက်တစ်ခါထပ်တွေ့မယ် ပြီးခဲ့သည့်ဆောင်းပါးကိုလေ့လာပြီးနောက် WINPAL ပရင်တာကို IOS စနစ်ဖြင့် Bluetooth နှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်ကိုသင်ပြီးပါပြီ။ ထို့နောက်လက်ခံရရှိသည့်ပရင်တာသို့မဟုတ်တံဆိပ်ပရင်တာသည် Android စနစ်နှင့် Bluetooth နှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်သည်ကိုလေ့လာပါမည်။ အဆင့် ၁။ ပြင်ဆင်နေသည်။ ①ပုံနှိပ်ပါ။
(Ⅳ) WINPAL ပရင်တာကို IOS စနစ်တွင် Bluetooth နှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်နည်း
မင်္ဂလာပါ၊ အံ့ဖွယ်ကောင်းသောနေ့စတင်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆောင်းပါးသုံးပုဒ်တွင် iOS / Android / Windows စနစ်ရှိ WINPAL ပရင်တာကို Wi-Fi နှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်ကိုသင်လေ့လာပြီးကြောင်းသေချာပါသည်။ ဒီတော့ဒီနေ့ငါ IOS system နှင့် Bluetooth လက်ခံရရှိသည့်ပုံနှိပ်စက်သို့မဟုတ်တံဆိပ်ပရင်တာသည်မည်သို့အပူရှိန်ရှိသည်ကိုပြမည်။
(Ⅲ) WINPAL ပရင်တာကို Windows စနစ်ရှိ Wi-Fi နှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်နည်း
21-05-06 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
ပြန်လာကြပါသူငယ်ချင်းတို့ နောက်တစ်ခါထပ်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသင်ကြားသောနိဒါန်းပရင်တာသို့မဟုတ်တံဆိပ်ပရင်တာသည် Windows systerm နှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်သည်ကိုလုပ်ကြပါစို့ ~ အဆင့် ၁ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း - power ကွန်ပျူတာစွမ်းအား②ပရင်တာပါဝါ③ computer ကွန်ပျူတာနှင့်ပရင်တာက c ဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။
WINPAL Thermal Printer မှပျော်ရွှင်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားနေ့
မင်္ဂလာရှိသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားနေ့မေမေနေ့ပွဲတော်နီးပြီ။ WINPAL မှ ၀ န်ထမ်းများကသင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုသင့်အားပျော်ရွှင်စေသည့်အားလပ်ရက်ဖြစ်ပါစေ။ WINPAL ကိုအမြဲတမ်းကူညီပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမျိုးသားပြဌာန်းခွင့်အားလပ်ရက်၏ပြဌာန်းချက်အရနှင့်ပေါင်းစပ် ...
(Ⅱ) WINPAL ပရင်တာကို Android စနစ်ရှိ WiFi နှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်နည်း
ပြန်လာကြပါသူငယ်ချင်းသူငယ်ချင်း together ငါအတူတူပြန်နေရတာအရမ်းပျော်တယ်။ ဒီကနေ့မှာလက်ခံရရှိမှုနိယာမနဲ့ပရင်တာက WiFi ကို Android နဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်တယ်ဆိုတာကိုဒီအခန်းမှာမိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ အဆင့် ၁။ ပြင်ဆင်ခြင်း - Power ပရင်တာပါဝါ၊ ②မိုဘိုင်း Wi-Fi ON ③ and သေချာအောင်လုပ်ပါ။
(Ⅰ) WINPAL ပရင်တာကို IOS စနစ်ရှိ Wi-Fi နှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်နည်း
ဟေးချစ်လှစွာသောသူငယ်ချင်းများ၊ မင်းဒီအခက်အခဲကိုကြုံတွေ့ဖူးဖူးပါသလား pretty တော်တော်လေးနေသာသောနံနက်တစ်ခုမှာမင်းကပရင်တာအသစ်တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိလိုက်ပြီးပျော်ရွှင်စွာစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ရုတ်တရက်သင်၏အိုင်ဖုန်းပေါ်ရှိ Wi-Fi ကိုပရင်တာနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အခက်တွေ့သည်။ အရမ်းစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ် စိတ်မပူပါနဲ့! ရဲ့ ...
ကွမ်ကျိုး၊ ကွမ်ကွောင်း၊ Nansha ခရိုင်၊ NO.80 JinGang လမ်းမ။
အပူလက်ခံရရှိပရင်တာ 80mm, Wifi လက်ခံဖြတ်ပိုင်း, မိုဘိုင်းငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်း, 80mm အပူလက်ခံရရှိပရင်တာ, ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းပရင်တာ, မိုဘိုင်းပရင်တာ,
©မူပိုင်ခွင့် - ၂၀၁၀-၂၀၂၀: GuangZhou Winprt Technology Co. , Ltd. အားလုံးမူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။